အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်(PDF)ရဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ ဆွေးနွေးခန်း
Like – 13K Share – 1581
ဂမၻီရ အမုန္း says:
ဆိုင်ကယ်တွေ ဘာ့ကြောင့် ဖမ်း
ဗုန်း ဗုန်း ဘာ့ကြောင့်ဖောက်
2021-06-02 at 9:09 PM
ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်တွေသတိထားရမယ် ကျောင်းတွေမီးရှို့တယ် ဗုန်းခွဲတယ် ပြည်သူ ကို အကြမ်ဖက် အဖြစ် စွတ်စွဲတယ် ဘက. ကျောင်းတွေဖျက်စီးမယ် ကုလားဖမ်းပြမယ် ကုလားမုန်းတီးရေး လုပ်မယ် ပညာရေး စကစ မအောင်မြင်ရင် ကလေးတွေနဲ့ ဆရာ အရူးတွေအသက် တွေရန်ရှာလာနိုင်တယ် ပြည်သူ PDF. ကို နမ်မည်ဖျက်လုပ်ကြံမယ်
2021-06-02 at 9:28 PM
ပြည်သူ့တပ်မတော်သားတွေ မျက်စိရှေ့မှောက်ရောက်လားတဲ့တစ်နေ့ အလေးပြုမယ်ဗျာ
2021-06-02 at 9:35 PM
We love NUG PDF
Cho Yaw Kee says:
2021-06-02 at 9:38 PM
Min Kyaw Thar says:
2021-06-02 at 9:50 PM
Fedral army ရဲ့သဘောတရားကြင့်ဝတ်တွေကို သိခဲ့ရလို့ အလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်
ဗမာပြည်ရဲ့ ပထမ ဆုံးတပ်မတော်ကလဲ ဒိထက်မကတဲ့ကြင့်ဝတ်တွေ ထုတ်ခဲ့ပါတယ်
လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှု နောက်ပိုင်းမှာ ကြင့်ဝတ်တွေချိုးဖေါက်လာကြတာပါ
ခုတို့ပြည်သူတွေ ယုံကြည်တဲ့ fedral army ကလဲဘယ်အချိန်လောက်ထိပြည်သူတွေကို အာမခံချက်ပေးမှာလဲ
ခုချိန်ကတော့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက သွေးဆူနေချိန်မို့ ဒီသဘောတရားကို လက်ခံထားပါတယ်
တိုင်းပြည် အေးချမ်းသွားပြီးစစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးသွားပြီး တဲ့အချိန်မှာ အခုအချိန်လို လက်နက်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိရသေးချိန်က လူငယ်တွေလက်ထဲ လက်နက်ရှိလာခဲ့ပြီး လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းရဲ့ အရသာကို သိလာရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေသာ ပြောင်းသွာခဲ့ရင် ဦးနေဝင်း အစိုးရလိုဘဲး ဖြစ်သွားကြမှာလားလို့ ( ပြည်သူချစ်သောပြည်သု့ ဝန်ထမ်း အကျိုးဆောင်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဝေးကွာသွားကြလိမ်မယ်) လို့ထင်ပါတယ်
2021-06-02 at 10:10 PM
စစ်ခွေးတွေက ဥပဒေနားမလည်တာလဲမပြောနဲ့ အချို့ဆိုရင် အတန်းပညာဘာမှမရှိသလို အသိပညာဆိုတာကလဲသူတို့အဆင့်နဲ့ကပ်မရနိုင်ဘူးလေ ၊ကကြီး ခကွေး A B C ၁ ၂ ၃ သိဖို့ဝေးစွ ဖြူ နီ ပြာ ဝါ ဆိုတဲ့ အရောင်တောင် သိမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး ၊အရှက်တရား သိက္ခာ ကင်းမဲ့သော အရိုင်း အစိုင်း သူခိုး ဓါးပြ များစုဝေးရာကို မြန်မာ့တပ်မတော်(စစ်ခွေးတပ်မတော်)လို့ခေါ်သည် သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့”ရဲဘော်မသေ သေသော်အပြွတ်လိုက်” ပါတဲ့ဗျာ😆😂🤣
Kyaw Kyaw Maw Maw says:
2021-06-03 at 12:35 AM
2021-06-03 at 7:26 AM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိူင်ငံ NUG ပြည်သူ့ အစိုးရ နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ PDF လူငယ် အာမီ တပ်မတော်အား ထောက်ခံပါသည်
2021-06-03 at 7:38 AM
2021-06-03 at 7:44 AM
လုပ်၍မရတာဘာရှိလဲ ကြိုးစားလို့မရတာဘာရှိလဲ Nugက လုပ်တယ်ဆိုပီး ဂျင်းထဲ့နေတယ်
Maung Khine Nyo says:
2021-06-03 at 11:49 AM
https://www.facebook.com/100003916485050/posts/2019657648174765/? ၾကည့္ နားေထာင္ လီးကိုပဲ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္မွတ္ပါ
2021-06-03 at 3:13 PM
2021-06-03 at 4:43 PM
အဖိုးတန်တဲ့ စကားလုံးတွေရှင်းပြပြောပြပေးခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2021-06-03 at 5:01 PM
2021-06-04 at 1:43 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ် တင်ပြပုံလေးပါ
2021-06-04 at 2:11 PM
2021-06-04 at 4:17 PM
2021-06-04 at 9:48 PM
Yi Shan says:
2021-06-05 at 12:44 PM
ဆန္းလင္း ဆန္းလင္း says:
2021-06-06 at 9:27 AM